I-Semalt iqinisekisa iindlela zokwenza izinto ezenziwe ngokuzenzekelayo Ukunciphisa Umsebenzi Wakho
Ukukhutshwa komxholo kuyinkqubo yokukhipha ulwazi olubalulekileyo kwi-intanethi kwaye uyipapashe yakho kwiwebhusayithi. Abaninzi be-webmaster kunye nabalobi bathatha amanqaku ukusuka kwiiblogi kunye newebhusayithi ukuze bakhulise amashishini abo. Amashishini, abaprogram kunye nabathuthukisi bewebhu basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zewebhu okanye izixhobo zokumbiwa kwemigodi ukuze zenze imisebenzi yazo. Iindlela ezigqwesileyo zokucoca izinto zikhankanywe ngezantsi.
1: I-DOM Ukuhlaselwa
I-DOM okanye i-Document Object Model ichaza isitayela nesakhiwo somxholo ngaphakathi kweefayile ze-HTML kunye ne-XML. I-DOM parsers isetyenziswe ngabaprojekthi kunye nabaphuhlisi ukuze bafumane imibono enzulu yeewebhu ezahlukeneyo - big dollar casino no deposit bonus codes august 2018. Unokusebenzisa i-DOM parser ukuba ukhuphe umxholo wewebhu ngokulula. I-XPath isixhobo esibanzi sokwenza iiwebhusayithi ezifunwayo kunye neeblogi kwaye ziyahambelana noMozilla, Internet Explorer kunye ne-Google Chrome. Nge XPath, unokwenza umxholo wesayithi okanye yonke indawo ngaphandle kwesidingo sezakhono zeprogram.
2: I-HTML Ukukhangela
3: I-Aggregation ye-vertical
. Zijolise kwiitheyibhile ezahlukeneyo kunye neenhlu kunye nokuvuna umxholo onentsingiselo ngokwemiqathango yazo. Abanye babo bathembela kwi-Kimono Labs kunye nezinye izixhobo ezifanayo ukufumana umsebenzi wabo. Olu buchule luza kukunika uncedo kuphela xa usebenzisa inani labaqhubi kunye ne-bots, kunye nomgangatho wamanyathelo enqaku lokusebenza kakuhle kwezi bots.
4: I-Google Amadokhumenti
iipredishithi ze-Google zisetyenziswe njengento enomxholo wokukhutshwa kwenkonzo. Le nqubo idume phakathi kwalabahluli. Ukususela kwi-Google Amadokhumenti, ungangenisa iifayile ezifunwayo uze uzifake njengezinto ezifunekayo. Ngaphandle koko, unokwenza rhoqo uhlolisise kwaye ulonge umgangatho wequlatho ngelixa utyalwa.
i-XPath okanye i-XML Inkqubo yoLwimi ulwimi lombuzo olusebenza kwiimibhalo ze-HTML kunye ne-XML. Ekubeni la maxwebhu asekelwe kwisakhiwo somthi, i-XPath ingasetyenziselwa ukuhamba ngephepha lewebhu elikhethiweyo kwaye unceda ukukhangela umgangatho womxholo. Inika inzuzo eninzi kwi-webmasters ngokudibanisa ne-HTML kunye ne-DOM ukuxubusha, kwaye umxholo unokushicilelwa kwiwebhusayithi yakho kwangoko.
6: Ukubhaliweyo Kwimizekelo yePatheni
Yindlela yokubonakalisa ukufaniswa asetyenziswe ngabaphuhlisi kunye nabaqulunqa kunye neelwimi ngeelwimi ezifana neRuby, Python, nePerl. Unako ukuphumeza le ndlela yokwakheka komxholo ukukhawula inani elikhulu lezayithi ngokupheleleyo okanye ngokukodwa.
Zonke ezi zixhobo zokulahla umxholo ziqinisekisa iziphumo zomgangatho, kwaye zikho izixhobo ezifana neCURL, HTTrack, Node. js kunye neWget ezenziwe ukulungiselela umsebenzi wakho. Unako ukukhipha ezininzi okanye izithuba ezincinane njengoko ufuna.